Adobe Creative Cloud ayaa hadda loo heli karaa Chromebook | Abuurista khadka tooska ah
Adobe Creative Cloud ayaa hadda loo heli karaa Chromebooks
Chromebooks-ka la soo saaray sannadkan waxay yeelan doonaan waxyaabo gaar ah geli kara Google Play Store. Taas oo macnaheedu yahay inay awood u yeelan doonaan inay marin u helaan hal milyan iyo barnaamijyo iyo ciyaaro laga heli karo dukaankan, kaasoo u furaya kala duwanaanshaha fursado badan oo ka imanaya qalabkan tayada sare leh.
Ma aha oo kaliya inay halkaa sii joogi doonto, laakiin Adobe ayaa ku dhawaaqaya soo bandhigida dhow ee qolkaaga Barnaamijyada Creative Cloud ee loogu talagalay Chromebooks; aalado yar oo ka badan kuwa ay doorteen ardayda jaamacadaha gobolada kala duwan ee aduunka si ay uga caawiyaan xirfadahooda.
Si tan loo sameeyo, shirkadda wax laga beddelay barnaamijyadooda Android iyojira sidaa darteed waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo xulashada Chromebooks. Chromebooks ayaa si sii kordheysa loogu tixgeliyaa jaamacadaha adduunka, sidaa darteed waa wax caqli gal ah in Adobe uu xiriir la leeyahay Google iyo booska waxbarasho ee loogu daro.
Sida lagu sheegay warbixin iyo daraasad ay samaysay Adobe, Boqolkiiba 85 ardayda boqolkiiba 91 macallimiintuna waxay rumaysan yihiin in hal-abuurnimadu door muhiim ah ka ciyaari doonto shaqooyinkooda fasalka ka baxsan. Waxa ugufiican dhamaan, aaladahaan waxaa heli kara ardayda iyo macalimiinta oo bilaash ah.
ka Barnaamijyada Adobe ayaa la heli karaa laga bilaabo maanta oo qayb ka ah barnaamijka beta waa:
Cloud Mobile Mobile
Mid kasta oo ka mid ah barnaamijyadan, sida Comp CC oo halkan soo martay dhawaan, waxaa loogu talagalay ka faa'iideyso awooda madasha Chromebook, oo ka mid ah waxa lagu qori karo xawaaraha, fudeydka iyo amniga. Wareegan koowaad ee barnaamijyadu waxay aasaas adag u yihiin hal-abuurka mustaqbalka iyo xirfadleyda farshaxanka si ay u sahamiyaan, wax u bartaan, uguna hal-abuuraan qaabab aan markii horeba la heli karin.
Waxay ku taal Mareykanka halkaasoo aaladaha noocan ah ay ka jiraan koritaanka sii kordhaya iyo caan, gaar ahaan booska la xiriira waxbarashada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Adobe Creative Cloud ayaa hadda loo heli karaa Chromebooks
Sawirada Dribbble Graphics waxay kaga jawaabaan shaqooyin gebi ahaanba bilaash ah